Home Ulo oru Europe Aleksandar Mitrovic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Echiche Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mma mara aha ya bụ "Mitro". Ihe omuma nke Mitrovic nwa anyi n'akwukwo ya na akwukwo ihe omuma. Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omumaputa site na nwata rue oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ike mgbaru ọsọ ya. Mana ole na ole na-ele Bioksandar Mitrovic Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Aleksandar Mitrovic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu- Mbụ na Ndụ Ezinụlọ
A mụrụ Aleksandar Mitrovic na 16th nke September 1994 na nne ya, Natasha Mitrović, na nna, Ivica Mitrović na Smederevo Serbia, Slovakia n'oge gara aga Yugoslavia.
Mitrovic tolitere na nwanne Milan bụ onye na-anọchite anya ya na obodo Smederevo nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Serbia. Site na mmalite, ezinụlọ Mitrovic abụwo ndị agbachitere Newcastle siri ike Alan Shearer. N'elu ala nke onwe ya, Mitrovic n'oge ọ dị n'oge ya na-apụ, ọha mmadụ nwere obi ike na isi ike. Ọ na-echeta ugboro ugboro na-eto eto ma na-agwa ya na ọ ga-abụ onye omempụ ma ọ bụ kickboxer site na nna ya. N'okwu ya;
Na-echegharị na mmalite ndụ ya, mgbe a jụrụ ya Telegraph na ihe ọ ga - eme n'enweghị football. Mitrovic zara ozugbo.
Amaghị m ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na anaghị m egwu bọl. Ikekwe ihe ebe m nwere ike iji adrenalin m. Ma eleghị anya ihe dị ka ịgba egwu.
Mitrovic nwere ume dị ukwuu mgbe ọ bụ nwata. N'ịbụ onye tolitere, ọ na-esiri ndị mụrụ ya ike ịnabata àgwà ya. Ọ bụ òkè ya na football nke mere ka ọ ghara ime mkpebi ndị dara ogbenye ọ mere mgbe ọ bụ nwata.
Aleksandar Mitrovic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu- Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
Mitrovic dị ka nwatakịrị kwenyere na ọ bụghị naanị na ọ ga - abụ onye nrịba ama ma ọ ga - amasị igwu egwu na ịla ezumike nká na Newcastle. N'oge dị ka nwa ewu, o nwere mkpesa Newcastle. N'okwu ya;
Newcastle aghọwo ụlọ m kachasị amasị m kemgbe m bụ obere nwa na Serbia. Anọ m agbaso Newcastle ndụ m dum. Enwere m uwe elu abụọ Newcastle mgbe m dị obere. Ọ bụ ihe ọhụrụ, ọtụtụ ndị na-ahọrọ otu dị ka Manchester United ma ọ bụ Barcelona, ​​ma maka m, ọ bụ mgbe nile Newcastle.
Ịhụnanya Mitro nwere maka bọl hụrụ ya ka ọ hụrụ ya na 2005 na-edebanye aha na otu onye ntorobịa Serbian na-eto eto bụ Partizan bụ onye nyere ya ebe ahụ iji kwalite ọrụ ya ma gosipụta talent ya.
Ọrụ ntorobịa na-enwe ọganihu bịara na njedebe na 2011, afọ ọ gbanwere ọkachamara mgbe ọ gbasịrị ụgwọ na Teleoptik. Mgbe ọ lọtara, ọ ghọrọ onye na-agba ọsọ dị iche iche. Mitrovic duuru otu ndị agha iji merie Serbian SuperLiga n'oge mbụ ya.
Mgbe ọ dị afọ 18, a kpọrọ Mitrović aha n'etiti ụmụ akwụkwọ 10 kachasị elu n'okpuru afọ 19 na Europe site na nhọrọ nke UEFA ndị nta akụkọ. Nke a dị ịtụnanya na-adọrọ ndị na-egwu egwuregwu na Europe. Mgbe mkparịta ụka gasịrị, Mitro mesịrị banye na Belgian Anderlecht ebe ọ gara n'ihu ịchọta ihe mgbaru ọsọ 44 maka egwuregwu 90 na-emeri onye nchịkọta egwuregwu n'elu oge nke abụọ ya.
Nke a na-adọta nnukwu ụlọ nrọ ya, Newcastle, nke nwetara ya na 2015. Mgbe esemokwu na Rafa Benitez na 2018, Mitro kpebiri oge ya na ụlọ klọb ya. Na mmeghachi omume, ọ rịọrọ ka a gbazite ya na ụlọ ndị dị na North East. Fulham na West London ghọrọ ebe ọ na-aga. N'okwu ya;
Achọrọ m ịhapụ Newcastle n'ihi na achọrọ m oge egwuregwu na egwuregwu dị mkpa n'ụkwụ m. M na-achọsi ike igwu egwuregwu football, na-anọ na pitch, iji nyochaa mgbaru ọsọ.
O sonyeere Fulham ruo mgbe ebighị ebi mgbe o nyechara ha aka ịkwalite Premier League na 20118. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Aleksandar Mitrovic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
N'okpuru nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na onye ọ bụla na-aga nke ọma na Serbian Footballer (Lee Nemanja Matić), e nwere otu akwa ma ọ bụ enyi nwanyị mara mma nke a hụrụ n'aha Kristina, nke gosipụtara ịhụnanya maka ndụ ya.
Mụ na onye òtù ọlụlụ ya Kristina, Mitrović nwere nwa, aha ya bụ Luka na nwa nwanyị a na-amaghị aha ya.
Obi abụọ adịghị ya, ike Mitrovic, yana ndụ ndụ ezinụlọ ya dị mma na-ewetara ya nkọwa zuru ezu.
Aleksandar Mitrovic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu- Iwe ọkụ ọkụ
Ọhụụ nke Mitrovic dị na igbe na ọhụụ na mbara igwe nwere ike ịdaba site na ọkụ ya nke na-enweghị atụ nke yiri nke Zidine Zidane. Mitrovic bụ onye a ma ama maka ndị iro ya.
Ihe a merenụ mere na May 2014, mgbe Anderlecht kpaliri ụlọ nzukọ Brugge na Bjorn Engels ma hapụ ya. Lelee foto N'okpuru ebe a;
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya ka ọtụtụ ndị football football mara banyere iwe iwe nke Mitrovic nke kpatara ya aha ọjọọ na club Anderlecht na Serbia. Mitrel dị ka onye na-ede akwụkwọ akụkọ Belgian kọwara dịka onye onye na-eme ka mmadụ mara ya mgbe e jiri ya tụnyere ya Mario Balotelli Lelee anya.
Aleksandar Mitrovic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu- Mkparịta ụka agbamakwụkwọ
Ememme Mitrovic (nke e sere n'elu) enweghị nkọwa maka ihe ndị mmadụ kwuru na ọ na-anọchite anya ya. Ọ bụ ezie na Mitrovic n'onwe ya na-agọnahụ na ọ bụ ajuju se ** al reference.
Kama nke ahụ, onye Serbia na-ekwu na ọ kwụsịrị ire ya wee tinye mkpịsị aka ya abụọ n'akụkụ ọ bụla n'ihi na ọ na-egwu egwu "Na-ebipụ ire nke ndị nkatọ ya".
Aleksandar Mitrovic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu- Ọzọ Zlatan
Ndi Ama Ọfiọk? ... Mitrovic e dubbed The "Ọzọ Zlatan Ibrahimovic"Dị ka o si na ọbaraline ya.
Ihe abụọ kpatara ihe mere Mitrovic ji bụrụ "Osote Zlatan Ibrahimovic"Kemgbe ọ bụ nwata. Na mbụ, Ibrahimovic a mụrụ na bred ke Sweden Otú ọ dị, ezinụlọ ya si na mbụ mba Yugoslavia n'ebe ugwu Europe ọtụtụ afọ gara aga. Mitrovic sikwa n'otu mpaghara nke obodo mbụ ahụ nke a maara maka ụdị àgwà ha.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Aleksandar Mitrovic na nwata. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!